FIANGONANA FAHENINA: FILADELFIA - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
FIANGONANA FAHENINA: FILADELFIA
22 novembre 2020 8 janvier 2021 admin
FIANGONANA FITO TOMBO-KASE FITO (Apokalypsy toko fahenina)
FIANGONANA FAHENINA: FILADELFIA Ny Tombo-kase fahenina
Apokalypsy 3:7 – 13 «7 [Filadelfia] Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana*[* Gr. eklesia] any Filadelfia: Izao no lazain’izay masina, Izay marina, Izay manana ny fanalahidin’i Davida, Izay mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha: 8 Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina*[* Na: fa na dia kely aza ny herinao, dia efa nitandrina, etc] ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. 9 Indro, alaiko ny sasany amin’ny synagogan’i Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga, indro, hataoko tonga hiankohoka eo anoloan’ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao. 10 Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana ianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany. 11 Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao. 12 Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy; ary hosoratako eo aminy ny anaran’Andriamanitro sy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin’Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. 13 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana*. [* Gr. eklesia] »
Io no fiangonana fahenina dia ilay filazàna ny fifankatiavan‟ny rahalahy.
NY HEVITRY NY TENY
Ny hevitry ny teny hoe FILADELFIA dia fitambaran‟ny teny roa nosarahina dia ny hoe : FILIA izay midika ho FITIAVANA sy DELFIA izay midika ho RAHALAHY ; izany hoe : ny teny hoe FILADELFIA izany dia midika hoe “FIFANKATIAVAN‟NY RAHALAHY”.
(Marihina fa misy karazany telo ny fitiavana dia ny : Ny fitiavana FILIA = fitiava-namana Ny fitiavana EROS = fitiavana ara-nofo, Ny fitiavana AGAPE = fitiavan‟Andriamanitra ) Apokalypsy 6:12 – 17 «12 Ary nahita aho, rehefa novahany ny tombo-kase fahenina, dia nisy horohorontany mafy; ary tonga mainty tahaka ny lamba volon’osy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. 13 Ary ny kintana tamin’ny lanitra dia niraraka tamin’ny tany, toy ny aviavy manintsana ny voany manta, raha hozongozonin’ny rivotra mahery izy. 14 Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin’ny fitoerany. 15 Ary ny mpanjakan’ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mbamin’ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin’ny lavaka sy tao amin’ny vatolampy eny an-tendrombohitra; 16 ary hoy izy tamin’ny tendrombohitra sy ny vatolampy; Mianjerà aminay, ka afeno izahay amin’ny tavan’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy amin’ny fahatezeran’ny Zanak’ondry; 17 fa tonga ny andro lehiben’ny fahatezeran’ireo*, ka iza no mahajanona? [* Na: ny fahatezerany] »
Raha mamaky an‟io an-dalan-tsoratra masina io isika dia ahita fa ilay famantarana ny fiahavian‟i Jesosy Kristy no hita ao. Izao no voasoratra ao amin‟ny :
Matio 24:29 – 31 «29 Ary raha vao afaka ny fahoriana amin’ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin’ny lanitra hohozongozonina. 30 Ary amin’izany andro izany dia hiseho eo amin’ny lanitra ny famantarana ny Zanak’olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin’ny tany, ary hahita ny Zanak’olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin’ny rahon’ny lanitra izy. 31 Ary amin’ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin’ireo ny olom-boafidy avy amin’ny vazan-tany* efatra hatramin’ny faravodilanitra rehetra.»
Dia mbola hitantsika ihany io ato amin’ny
Lioka 21:25 – 27 «25 Ary hisy famantarana eo amin’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin’ny tany dia hisy fahorian’ny firenena amin’ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondrohon’ny ranomasina sy ny fanonjany, 26 ka ho reraka ny fon*’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany; fa ny herin’ny lanitra dia hohozongozonina.[* Na: ka hisy ho faty aza] 27 Ary amin’izany andro izany dia hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. »
NY VANIMPOTONA NAHITANA NY TANTARA
Ny nahitana ny tantara dia ny 1755 – 1844. Izany hoe: karazany ny nifandrirotra tamin‟ny tantaran‟ny fiangonana Sardisy izy ity, satria ny fiangonana Sardisy dia tapitra taty amin‟ny taona 1798, fa ny an‟ny fiangonana Filadelfia dia taty amin‟ny taona 1755 izy no efa nanomboka. Ny tantaran‟ny fiangonana sekta no tena ho hita ato. Raha vao miresaka sekta izany ianao, dia amin‟ny olona izany dia efa tena zava-doza mihitsy. Raha vao mahita banderole mipetaka hoe fampianarana apokalypsy, dia efa mibetrobetroka ny sasany hoe: izahay indray dia tsy miditra amin‟ireny sekta ireny mihitsy, ny adala sy vendrana ihany no mihaino izany fampianaran‟ny sekta izany,ary izahay dia tsy mba mampandroso an-trano ireny sekta ireny mihitsy. Ka normal raha miteny izany ny olona, satria tsy hainy ny dikan‟ity teny hoe sekta ity. Fa aminy dia rehefa ivelan‟ireo fiangonana 4 tonta lazaina fa lehibe, dia efa sekta izany aminy, ary dia tena zava-doza tsy azo hatonina mihitsy.Any misy boky iray nivoaka milaza hoe.: “vonjeo fa lasan’ny sekta ny olona”.
Dia gaga tokoa ny tena raha mandinika an‟izany ary dia lasa mametram-panontaniana mihitsy aza hoe: Fa maninona moa ny olona no hatahorana ho lasan‟ny sekta? Fa nahoana ihany koa no hoe tena mila vonjena mihitsy izany?. Mazava ho azy fa mipetaka indray ny sonia eto:
SONIA NA ENTETE NA FAMANTARANA “
Izao no lazain’izay masina, Izay marina, Izay manana ny fanalahidin’i Davida, Izay mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha”: io dia mbola i Jesosy Kristy ihany io voalaza io. Izany hoe ity voalaza ato amin‟ny tombo-kase faha enina io dia milaza ny faharavan‟izao tontolo izao, sy ny fihavian‟i Jesosy Kristy, dia nanomboka tokoa tamin‟ny taon-jato niainan‟ny fiangonana Filadelfia io (1755 – 1844). Izany dia nanomboka nitory amin‟izay ny kristiana lazaina fa sekta, fa hoe mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan‟Andriamanitra. Dia nisy aza ny fiangonana kilasiana ho sekta tamin‟izany andro izany, izay nanentana ny olona mihitsy ary nanao kajy tamin‟ireny faminanian‟i Daniela ireny fa hoe: ho avy amin‟ny taona 1844 ny Tompo dia namidy daholo ny fananana, sy izay rehetra nananana, ary dia teny an-tendrombohitra no niandry, ary dia samy nanao ankanjo fotsy daholo, fa hoe ho avy i Jesosy Kristy, kanjo tsy tonga i Jesosy Kristy, fa ilay rahilahy no tonga, ka ilay rahilahy aza moa hatramin‟izao dia mbola mitory any amin‟ny radio, mandrava didy folo, dia mbola miteny hoe izaho no Jesosy amin‟izao fotoana izao. Tsy mahagaga izany fa efa voasoratra any amin‟ny Soratra Masina izany, ka efa nampitandrina ny Soratra Masina manao hoe mitandrema fa sao hisy hamitaka anareo, fa maro no hilaza fa hoe izaho no kristy, ka maro no hovoafitany. Ka tsy atao mahagaga antsika izany. Fa isika kosa mianatra soratra masina tsy azo fitapitahina.
NY FIDERANA AZY, NA FANKASITRAHANA AZY Tsy mba misy fanankianana io fiangonana io ary dia roa ihany no fiangonana tsy mba nokianin‟i Jesosy Kristy dia ny Smyrna sy ny Filadelfia izany.
Apokalypsy 3:8 « Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina* ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako» Ao amin‟ny Sardisy kosa dia misy zavatra tsy tonga amin‟ny tanjona tokony hanaovana azy tao, satria mafy loatra ny fanenjehana sy ny fandripahana ny kristiana izay nahazo anarana hoe eretika dia najary tsy tonga hatramin‟ny farany ilay fanavaozana, ka izay no nahatonga izay fanavaozana kely efa azo tsy hiverin-dalana izay. Izany hoe tsy hiverina intsony izany ny fiangonana protestanta hanao kofesy na hanao arahaba ry Maria, na hanao sari-masina ao ampiangonana na angata-bavaka amin‟ireo olo-masina. Ka dia izany no mahatonga ny protestanta hanakiana ny eglizy katolika milaza hoe: ny anareo ny Jesosinareo dia mbola mifantsika amin‟ny hazo fijaliana hatrany, fa ny anay efa tsy eo intsony. Dia mba jereo anie ny hazo fijaliana any amin‟ireo fiangonana protestanta ireo fa efa tsy misy sarin‟i Jesosy intsony. Tsy misy Jesoa mifantsika intsony any amin‟ny protestanta. Ka izay zavatra efa notazonin‟ny protestanta dia notazoniny hatramin‟ny farany, ohatra tsy misy protestanta mankalaza ny daty 15 aogositra izany.
Rehefa tonga aty amin‟ny fiangonana Filadelfia kosa dia izao no hilazany azy: Apokalypsy 3:8 « Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina* ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. [* Na: fa na dia kely aza ny herinao, dia efa nitandrina, etc] »
Nasiana varavarana mivoha eo anoloany, dia ny varavaran‟ny filazantsara. Iarahantsika mahalala tsara, fa tsy mba afaka mamaky baiboly ny olona talohan‟ny taona 1755. Fa nanomboka tamin‟ny taona 1755 vokatr‟ilay fanavaozana ara-pivavahana dia nitsangana ny fikambanana mpampiely baiboly. Satria ilay baiboly tany ampiandohana dia vita tamin‟ny teny grika, sy hebreo, sy teny latina, dia olona vitsy ihany no mahay mamakyizany.Fatato aoriana dia nanjary voadika tamin‟ny teny anglisy, alemana, ary frantsay izany baiboly izany. Dia avy eo lasa voadika tamin‟ny fiteny marosamihafa izany ny baiboly, ka nanjary varavarana tsy nety nikatona teo alohany. Dia tsy voasakantsakana intsony izany ny olona amin‟ny fianarana ny baiboly, satria efa samy misy dikany amin‟ny fiteny maro samihafa izy rehetra.
Hita amin‟ny fiteny maro samihafa ireny na sovietika, na sinoa na kongoley na arabo, na espaniola, na romana, sns… Afaka mamaky baiboly izany ny olona amin‟ny fiteniny avy. Ka ilay varavarana misokatra izany, raha eo amin‟ny tantaran‟ny fiangonana no jerena dia ilay fotoana izay nanombohan‟ny fahafahan‟ny ny olona namaky ny baiboly tamin‟ny 1755. Satria tany alemana no nanomboka nitrangan‟izany tamin‟ny andron‟i Luther, ary izy no nandika ny baiboly tamin‟ny teny alemana. Dia akory ny hafalian‟ny olona satria nanjary lany andro teo ampamakiana baiboly ny olona, satria efa ela izy ireo no nitsiriritra mba te hamaky izany baiboly izany fa tsy afaka, satria natokana ho an‟ireo Mopera sy pasitera fotsiny no afaka namaky baiboly.
Ka rehefa nitsangana ilay fikambanana mpampiely baiboly, dia naparitaka ny baiboly, ka izay hananan‟ny olona baiboly fotsiny aloha no tanjona tao anatin‟izany. Satria tsarovy fa nisy ny vanimpotoana izay tsy namelana ny hananan‟ny olona baiboly mihitsy tao an-tokatranony, ka raha sanatria nahatratrarana an‟izany tao aminao, dia mety maha voaheloka ho faty mihitsy izany, satria ny famakiana baiboly tamin‟izany dia natokana fotsiny ihany ho an‟ireo mpitondra fivavahana, ka ny ataon‟ny mpino izany dia ny manaiky fotsiny ihany izay voalazan‟ireo mpitondra fivavahana satria ireo no efa nomen‟ Andriamanitra fahendrena sy fahalalana ny soratra masina, fa ny vahoaka dia dondrom-belona avokoa.
Ka ny fahatratrarana baiboly tao an-tranonao tamin‟izany dia mahavoasazy sy mahafaty mihitsy aza. Fa rehefa tonga teo an-tanan‟ny olona ny baiboly dia nanomboka namaky izany izy, ary dia niha- nahiratra ny mason‟ny olona, ary mbola nisy mpanoratra aza tao amin‟ny fiangonana katolika nilaza fa hoe: “fahadisoana lehibe anie hoy izy ny nataon’ndry Calvin sy ry Luther namela malalaka ny olona hamaky baiboly. Jereo ny vokatr’izany famelana ny olona hamaky baiboly izany, (satria tamin’izany dia mbola tsy nisy fiangonana hafa tsy ny katolika sy ny protestanta), dia jereo hoy izy ireo ny fiparitaky ny olona ho lasa any amin’ny protestanta, eny fa na dia ry zareo protestanta aza hoy izy, dia mbola hiparitaka tsy misy hoatra izany aorian’ny famelana malalaka ny famakiana ity baiboly ity. Nanao hadalana be, sy fahadisosana be, ireo nanaparitaka ny baiboly, fa jereo tamin’ny fotoana tsy mbola namelàna ny famakiana ny baiboly dia tsy nisy niparitaka izany ny vahoaka, fa nijanona tamin’ny toerana iray nandritra ny 1000 taona be izao. Ka noho ny hadalana nataon‟ireto mpanavao fivavahana izany dia niparitaka io fiangonana io.
Ka inona ny zava-nisy taty aoriana, fa na dia ny protestanta izay nanaparitaka ny baiboly ihany koa aza dia mba niparitaka ihany koa, dia nivoaka avy tao ohatra ny “Batista Biblika”; ny” Méthodiste”, ny “Assemblé de Dieu”, ny “Adventiste”, ny” Bahai,” ny” Sentoisme”, ny “Témoin de Jehovah” sns be dia be. Ny antony dia tsotra ihany, namaky baiboly daholo ny olona, ka dia nahita zava-baovao nipoitra hatrany. Ka niseho ny fiparitahana, satria rehefa misy fahamarinana na “zava-baovao miseho sy hita, dia tsy maintsy misedra fanoherana hatrany izany, mandram-pahatongan‟iny tena ho volamena mamirapiratra any amin‟ny olona, nefa tsy maintsy mihatra aman‟aina, sy fisedrana fanoherana izany. Mitondra fisarahana sy korontana rehefa misy fahamarinana mipoitra.
Dia jereo ny tantaran‟ny fiangonana tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy, nitondra fampianarana i Jesosy Kristy kanefa dia nitarika korontana izany teo amin‟ny fivavahana Jodaisme. Nitondra fisarahana teo amin‟ny fianankaviana, satria ny fiangonan-drazana ilay fiangonana jodaisme, kanefa dia nipoitra ny fampianaran‟i Jesosy Kristy, dia raikitra ny ady tao anivon‟ny tokatrano iray, raikitra ny hoe mivadim-pinoana ianareo, raha mbola te ho zanako ialahy dia tsy mivadika ho amin‟izany fiangonana kristiana izany, fa ny fiangonan-drazantsika dia jodaisme ihany, tsy mahazo miditra amin‟ny fasan-drazana, esorina amin‟ialahy daholo ny tombotsoan‟ialahy raha manaraka an‟izany Jesosy Jesosy izany, ary dia ny niafarany dia niafara tamin‟ny famonoana an‟i Jesosy mihitsy. Ka na ny apostoly Paoly aza fony mbola Saoly no anarany tamin‟izany, dia nifofofofo mihitsy izy handripaka izay mpanaradia an‟i Kristy, ka ny kristiana izay manaraka io Kristy io dia nenjehina satria tsy izy io Jesosy Kristy io hoy izy. Jereo ihany koa, rehefa tonga ny fanavaozana izany finoana izany dia niaritra ny mafy tokoa, satria nametraka ny lehibe, fa isika katolika hatrany, fa izay mivadika amin‟ny katolika dia very, tsy misy mivadibadim-pinoana izany eo. Niala tao ireto protestanta ireto nitondra izay fanazavana efa hitany, ary dia niorina tamin‟izany izy. Rehefa tonga ny fisokafan‟ny famakiana ny baiboly, dia nanjary nisy olona nahita zava-baovao indray, ataoko ohatra fotsiny: rehefa nisokatra ity varavarana ity ka afaka nahita zavatra hafa ny olona, toy ny hoe tsy tokony ho ny zaza no hatao batisa fa ny lehibe, dia novohizin‟ireto olona protestanta ireto indray izany, fa ny lehibe no atao batisa fa ny batisan-jaza dia nolovaina avy tamin‟ny fampianaran‟ny katolika.
Fa ny baiboly dia milaza hoe: “mandehana ka ataovy mpianatro ny firenena rehetra, izay ianareo vao manao batisa azy, mibebàha ka aoka atao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy, izay mino sy hatao batisa no vonjena, ary izay mino ka nandray ny toromarika dia natao batisa”.
Izany hoe: ny olona atao batisa izany dia: – ny olona efa nianatra, afaka mino, ary afaka manolo-tena hatao batisa. Izany hoe olona afaka mianatra izany no olona hatao batisa.
Dia mbola olona afaka mibebaka ihany koa izany no hatao batisa. Izany hoe olona efa nianatra ny soratra masina, ary afaka mino, sy mibebaka no olona hatao batisa. – Izany no midika fa hoe: raharahan‟olon-dehibe fa tsy raharahan-jaza izany batisa izany. Dia novohizin‟ireto olona vaovao indray izany zavatra izany, ka dia nisedra fanoherana indray izany tao amin‟ny protestanta, ary dia raikitra ny hoe adala ve izany ry Calvin sy ry Luther ka tsy nahita hoe: ny olona lehibe izany no hatao batisa fa ianareo vao omaly ireo indray no hahita an‟izany? Raikitra indray ny fisarahana tao amin‟ny fiangonana, jereontsika tsara, fa ny fiangonana izay niorina taty aorian‟ity Filadelfia ity, (izany hoe taorian‟ny 1798) ka nitondra sy nankasitraka ny batisan‟olon-dehibe ity, dia niala na nitsoaka tao amin‟ny fiangonana protestanta, fa ny fiangonana katolika sy ny protestanta izay nanao ny batisan‟ankizy dia mbola mitazona ny hoe: zazakely daholo no tokony hatao batisa, fa izay fiangonana nanao batisa olon-dehibe indray dia lasa nantsoina hoe “sekta”. Izany hoe ny fiangonana nivoaka avy tao amin‟ny katolika ka nanao ilay fanavaozam-pinoana dia nantsoiny hoe “eretika” mba ahazava-doza azy, ary ahazoany manenjika azy, fa ireto izay nivoaka avy tamin‟ny fiangonana protestanta kosa, dia tsy nataony intsony hoe “eretika” no nilazany azy, fa nataony hoe “SEKTA”, satria niala tao amin‟ny fiangonan-drazany protestanta izy ireo.
Eto izany dia ho dinihantsika tsara, fa ny kristiana dia niala tao amin‟ny fiangonan-drazany Jodaisme, ny katolika ihany koa dia niala tao amin‟ny fiangonan-drazany kristiana, ny protestanta niala tao amin‟ny fiangonan-drazany katolika izay nantsoina hoe eretika, ny niala tao amin‟ny fiangonan-drazany protestanta kosa nantsoiny hoe sekta. Dia nahazo anaran-doza foana izany izy ireo mba ahafahana milaza azy hoe: zava-doza rehefa eretika, ary zava-doza rehefa sekta.
Fa ahoana kosa no filazan‟i Jesosy Kristy?
Apokalypsy 3:9 – 11 «9 Indro, alaiko ny sasany amin’ny synagogan’i Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga, indro, hataoko tonga hiankohoka eo anoloan’ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao. 10 Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana ianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany. 11 Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao. »
Ilay asain‟i Jesosy Kristy ho “tànana mafy” io, dia tsy anaram-piangonana io akory, fa ilay fahamarinan‟ny soratra masina, dia ilay fanavaozana niainga avy tany amin‟ny Sardisy ka niafara hatraty amin‟ny Filadelfia. Io no asainy notànana mafy fa tsy ilay fiangonan-drazana sy anaram-piangonana akory. Fa misy mantsy dia io anaram-piangonana io no manjary tanany mafy, ka tsy io no tanana mafy fa ilay satro-boninahitra efa nomena anao, ilay fanavaozana marina izay efa tonga ao anatinao no asainy Tanana mafy.
Fanazavana ny hoe SEKTA: Ity fiangonana Filadelfia ity no miresaka ny tantaran‟ny fiangonana sekta raha ny taon-jato nipotrany no jerena dia ny 1755 – 1844. Ireto karazana sekta ireto dia misy fiangonana maro no nivoaka tamin‟io taon-jato 18 – 19 io, ary ny malaza indrindra tamin‟izy ireny moa izany dia ny « Adventiste », ny « Vavolombelon‟i Jehovah ny Pantekotiste », ny « Bahaii, » ny ny « Néo apostolique », ny « Rose Croix », ny « Mormon », ny « Sekta Moon », ny « Aram-pilazantsara », ny « Jesosy Mamonjy », sns hatraty amin‟ny FAM na Apokalypsy.
Ka amin‟ny olona raha ny zava-misy amin‟izao fotoana izao no jerena, ny zavatra tonga ao an-tsaina voalohany raha vao miresaka hoe sekta, dia efa zava-doza hatrany no tonga ao an-tsaina. Satria efa niaraha-nahita tokoa, fa misy ireo fiangonana sekta no tena manao zavatra tena mamoa-doza tokoa raha araka ny efa hitantsika amin‟ny gazety, any ampitan-dranomasina any. Soa ihany teto amintsika, fa tsy mbola nisy fiangonana sekta nandoro olona na niboridana, na nifampikapa famaky. Fa ny hita teto aloha dia hoe sekta mifoka rongony. Tratran‟ny polisy tao ry ingahy Ranaivo, kanefa dia nazavain‟dry ingahy Ranaivo tao amin‟ny televiziona iray “TVPlus” fa hoe “ny olona afaka hoy izy na mpandresy no mifoka rongony, satria izay maharesy no mitafy fitafiana fotsy, ary io fitafiana fotsy io hoy izy dia vita amin‟ny rongony madinika”, ary hain-dRanaivo tsara no nanazava azy ka dia hoy izy hoe ny anareo ny olona mpandresy indray no gadrainareo, fa ianareo raha mbola resy dia tsy mifoka rongony izany mihitsy hoy ingahy Ranaivo. Ka zava-doza ny sekta raha tahatahak‟izany.
Fa ny eto Madagasikara kosa aloha ohatra, raha vao misy fivavahana iray mipoitra dia tsy maintsy misy olom-panjakana tonga mijery sy manao fanadihadiana mahakasika io fiangonana io. Ohatra iray izao, eto amintsika dia misy ny fiangonana iray antsoina hoe Mormon, maro be ny olona milaza fa hoe ireo Mormon ireo mitanjaka e! sy miboridana daholo ao am-piangonana e!. dia hoy aho hoe: tsy mba marina kosa izany, satria ny ERD sy ny FPVM aza tsy nisy niboridana nefa nofoanan‟ny fanjakana, ka raha sanatria tokoa ve miboridana daholo ny mpiara-mivavaka ao amin‟ny Mormon dia tsy ho samborin‟ny fanjakana. Aza mba minomino foana ohatra an‟izany kosa aloha isika, ary aza dia manaratsiratsy fiangonan‟olona toy izany, fa raha zavatra tsy misy porofo izany ve dia ho tenintenenina fotsiny amin‟izao. Ka tena marinamihitsy fa tena misy vavolombelona mihitsy izany! Dia tena fanjakana adalamihitsy izany ity misy eto amintsika raha izany ka ny fiangonana mampiboridana olona no tsy akatony fa ny fiangonana tsy mampiboridana olona indray no akatony.
Aza mba miteniteny foana ohatra an‟izany moa ry olona, fa mba lanjalanjao ihany ny zavatra tenenina. Ny eto amintsika dia tsy mbola misy izany sekta izay atao hoe mampitahotra izany. Fa ho an‟ny olona mantsy ny antsoina hoe “sekta” dia izay ivelan‟ny FFKM, (FJKM, EKAR, Loterana, Anglikana). Raha vao ivelan‟ireo dia efa heverin‟ny olona hoe sekta. Ka marina izany satria, efa izany no nalentika tao antsain‟ny olona, ka ny fiangonana ivelan‟ireo dia efa sekta avokoa no hilazan‟ny olona azy, eny fa na ireo mpanao Gazety aza milaza an‟izany hoe: ny fiangonana sekta izao na izaroa, ka tsy misy iraharahin‟ny mpanao gazety izay famaritana na hevitry ny teny hoe sekta izany, satria izany no efa nampianarina azy.
Fa isika kosa eto, dia tsy mba anao fijery tokana na lalan-tokana ohatra izany, amin‟ny famaritana sy ny fomba fijery ny teny hoe sekta, fa hijery kosa isika ny tena famaritana sy ny tena dikan‟ny teny hoe sekta, ary amantatra ny hoe: – Iza no tena sekta?. – Dia marina tokoa ve fa hoe: tena zava-doza tokoa ny sekta sa tsy marina izany?. – Raha zava-doza ny sekta, inona ilay sekta mamoa-doza?, – Ary inona ilay sekta tsy mamoa-doza?. – Dia raha hianatra azy ity izany isika, dia ho jerentsika daholo ny mahakasika an‟izany rehetra izany, ary ny amaranana azy dia ny hoe: ilaina ve ny sekta sa tsy ilaina? Ary raha ilaina izy, dia mazava ho azy fa tsy tokony ho foanana fa raha tsy ilaina izy dia tokony ho foanana. Satria misy fiangonana milaza fa hoe tokony akatona ny sekta fa mandrebireby olona, tokony ho foanana ny sekta satria mpangoron-karena fotsiny.
Dia hoy ny sasany aiza ko ry pasitera Mailhol vao oviana no niforonany dia efa manana 4×4 sahady!! Dia tsy hitan‟ny olona ve sa tsy mampaninona azy raha ny fiangonan-dehibe manana 4×4, toa tsy misy miteny fa raha vao ny fiangonana zandriny no manana dia mampaharary azy, ary avy dia hoe: “akatony any ireo fa mpangoron-karena fotsiny!!”. O ry zalahy a! aza dia akatona toy izany ity fomba fijerintsika ity, fa raha lazaina fa mpangoron-karena i Pasitera Mailhol sy ny Fikambanana Apokalypsy dia mba ampahafirin‟ny haren‟ireo fiangonan-dehibe ireo tokoa ary ny haren‟ny Fiangonana Apokalypsy?,
Izahay aza manontany tena hoe: mbola misy ho ahorona ihany ve ry zalahy any? Tsy efa lasan‟ny fiangonan-dehibe daholo ve ny harena?, izahay aza ity sahirana mihitsy mitady tany hanorenana fiangonana!, ary na mahita aza dia lafo dia lafo tokoa ny vidiny. Dia izahay vao omaly ity tokoa ve no mangoron-karena mainka moa fa ianareo izay efa taon-jato maro no nisiany ve tsy efa tena tototra tokoa?. Fa aza mba akatona ohatra an‟io moa ilay fijery!! Sa kosa rehefa i Pasitera Mailhol no halantsika dia tsy misy atao hafa tsy ny manompanompa fotsiny. Ny an‟ny sasany izany moa dia mody mampianatra ny apokalypsy izy nefa tsy apokalypsy akory no ataony fa i Pasitera Mailhol no ompaompaina ao isan‟andro, dia rehefa reraka ny manompa ao, dia tsy vita hatramin‟ny farany akory ny fampianarana ny apokalypsy fa miodinkodina ao sisa. Ka izany rehetra izany dia azo ilazàna fa hoe: “izany ilay sekta raharaha be izany, na ilay sekta zava-doza”. Ka ofaritantsika eto izany ny momba ity sekta ity, ary ataontsika ohatra ny mitrandraka safira ny fanadihadiana ity sekta ity. Ho jerentsika miaraka eto ary ny hoe: – Inona marina no atao hoe sekta? – Iza no atao hoe sekta? – Zava-doza marina ve ny sekta? – Raha zava-doza izy, iza no sekta mitera-doza, ary iza no sekta tsy mitera-doza?. Voalohany aloha dia apetraka tsara ety ampiandohana fa tsy vao i Pasitera Mailhol no sambany nandinika sy namakafaka ity antsoina hoe sekta ity, fa efa maro ireo manam-pahaizana sy mpandinika maro no efa namakafaka ity resaka ity, toa ireo teolojiana maro. Fa rehefa mamaky ny boky nosoratan‟ireny olona ireny isika dia mahita, fa arakaraky ny firehan-kevitr‟ilay mpanoratra ihany no amoahany ny hevitra mahakasika ilay sekta. Raha toa izany ka mihevitra ilay mpanoratra fa tsy ao anatin‟ilay sekta ny fiangonana misy azy, izany hoe ao anatin‟ilay fiangonan-dehibe efatra tonta, dia mazava ho azy fa tsy ilaza mihitsy iny mpanoratra iny ny lafitsaran‟ny sekta, fa tsy maintsy izay lafiratsiny hatrany no ho tanisainy ao. Dia tahaka izany koa ankilany, raha ohatra ka olona ao anatin‟ny sekta ihany koa no manoratra ilay boky, dia tsy ilaza izay lafiratsin‟ny sekta mihitsy izy ao, fa tsy maintsy izay lafitsarany hatrany no hovoiziny ao. Ka raha atao amin‟ny ohatra mivelabelatra kokoa ilay izy, dia izao: raha ohatra izao hoe fivavahana” Mizolmana“no hiresaka ny fivavahana Kristina, dia tsy anazava mihitsy ity fiangonana Islamiste ity ny mahatsara ny fiangonana kristiana, fa tsy maintsy izay lafiratsiny daholo no ho tanisainy ao amin‟ireo mpino ao aminy, mba tsy hahatonga ireo mpinony hivadika ho kristiana. Dia lojika izany satria ho fiarovany ny mpinony no mahatonga izany, fa sao lasan‟ny hafa. Dia tahaka izany koa ny kristiana, tsy hanazava mihitsy koa izy izay mety ho lafitsaran‟ny finoana musulman, na dia misy zavatra tsara aza ao, fa dia izay lafiratsiny rehetra no ho tanisainy ao, mba tsy hahatonga ny kristiana hivadika ho musulman. Dia lasa toy izany hatrany ny toe-tsaina entina manazava zavatra.
Fa ity fomba fanazavana entin‟i Pasitera Mailhol ity kosa, dia izao no hitondrantsika azy: – ho resahintsika ny lafi-tsaran‟ny zavatra iray, ary avy eo ihany koa – dia ho resahintsika ihany koa ny lafi-ratsiny, ary farany – dia havoakantsika kosa ny vokatr‟izany zavatra roa izany. Ny vokatr‟izany dia mba misokatra kokoa ny fomba fijery. Izaho tsy ilaza eto hoe izaho no tena mahay na mpandalina an‟ity fandinihina ny resaka fivavahana sy ny sekta ity, fa mba ampahany kely mba takatry ny saiko eto no entiko amintsika, fa anjarantsika no mikaroka sy mandalina lavidavitra kokoa. Raha ohatra izany isika manana fomba fijery misokatra, dia mazava ho azy fa raha hanaraka ity fanazavana momba ny sekta ity izany isika, dia hialantsika aloha ny toerana misy antsika eo amin‟ny fiangonantsika. Ohatra hoe: raha mitoetra izany ianao ao amin‟ireo fiangonan-dehibe 4 dia ny FJKM, EKAR, ny Loterana ny Anglikana,ka andinika ny mahakasika ity sekta ity, dia aza mipetraka amin‟izany toerana misy anao izany, fa mba miala kely ao aloha mandritra ny fanazavana ny sekta; na ihany koa raha ohatra ianao ka any amin‟ireo fiangonana lazaina fa sekta ireo indray no toerana misy anao, dia aza mipetraka amin‟izay maha sekta izay ianao eto ampanarahana ity fanazavana ity, fa ataovy ohatra ny olona tsy mivavaka ianao, na manana antokom-pivavahana ianao eto ampanarahana ity fanazavana ity. Ny zava-misy anefa, ary tsara ho marihina fa ny mpitondra fivavahana ihany koa mba manazava amin‟ity sekta ity. Ka ny olana miseho dia izao: indraindray izy ireo dia mialokaloka fotsiny eo amin‟ilay hoe “fitarihan‟ny fanahy fotsiny”, ary dia indraindray dia mahamenatra ny mihaino an‟izy ireo manazava azy ity, raha eo anoloan‟ireo olona nandalina sy nikaroka momba io zavatra io. Ohatra hoe: misy Pasitera manambany ny fahaizan‟ny Pasitera sasany tsy manana mari-pahaizana (toy ny “licence en théologie”, na “maîtrise”, na “doctorat”), ka lasa ilay Pasitera tsy nianatra indray no manjary manazava be hatrany amin‟ny fotony any nefa zavatra tsy nianarany akory ilay zavatra resahiny, dia lasa mahamenatrra be, satria lasa miteniteny fahatany ao izy, satria ny olona nandalina sy nikaroka an‟io dia mahita hoe: izao no fipetrak‟ity zavatra ity. Ny anankiray koa dia izao: atao ahoana moa no ieritreritra hoe misy mpianatra iray andeha hanala fanadinana bakalorea, kanefa izy tsy mianatra fa dia mipetraka fotsiny amin‟ny hoe: “ny fanahy no mampianatra”, fa izaho dia tsy hianatra lesona mihitsy fa hoe ny fanahy no mampianatra ahy. Dia ho afaka BAC ve izy raha hoe tsy nianatra mihitsy izy mandavan-taona fa dia nandika lesona fotsiny fa hoe iantehitra fotsiny amin‟izany hoe ny fanahy no mampianatra? Tsy ho afaka Bac na oviana na oviana mihitsy izy. Fa tsy maintsy misy fikarohana ataonao ao na atao hoe tsy manana diplome ianao fa mba manana fahalalana mamaky teny, mba afaka manao fikarohana, mba manadihady ireo izay vokatry ny fanadihadihana nataon‟ny manam-pahaizana, no mba manao fikarohana ihany koa, manao hoe: ahoana moa izany no tena hevitr‟ity zavatra ity? Fa ny ahy indray ny hitondrako fanazavana dia tsy ankiniko amin‟ny antokom-pivavahana iray izay milaza ny tenany ho tsy ho sekta, na fotom-pinoana iray izay milaza ny tenany ho sekta, fa ny ahy ny itondrako azy dia ny hoe ho raisiko ny fomba fijerin‟ny ankilany izay milaza azy tsy ho sekta, ka miampanga ny sekta fa tsy izy, ary ho raisiko ihany koa ny fomba fijerin‟ny ankilany izay milaza hoe izahay dia sekta, fa ireo milaza ny tenany ho tsy sekta ireo no tena tsy izy. Dia ny fitambaran‟ireo no mamoaka zavatra iray. Andeha hatomboka amin‟izay ny fanazavana. Ny hanombohantsika azy dia ny famaritana ny antsoina hoe sekta. Ho jerentsika ny amaritan‟ny mpanoratra katolika ny antsoina hoe sekta, ary avy eo ny mpanoratra protestanta. Miainga avy amin‟ny foto-teny ny teny hoe sekta avy amin‟ny teny grika sy ny teny latina mihitsy aloha, Ho jerentsika mihitsy ny hevitry ny teny hoe sekta hatrany ampiandohana sy ny nihaviany teny. Ary farany dia ho jerentsika ny hamaritan‟ny baiboly izany.
Ny famaritana ny teny hoe sekta
Ho an‟ny fiangonan-dehibe izay mihevi-tena ho tsy ao anatin‟ny sekta: – Rehefa ivelan‟ny fiangonana lehibe 4 (FFKM) FJKM, EKAR, Loterana na Anglikana dia efa sekta izay. Ka izany dia famaritana napetraky ny olona tsy te hisahirana, tsy te hamakafaka, ary tsy omena tsiny ireo olona manana izany fomba fijery izany, satria izany no efa napetraka tao andohany. Ka tsy hifidianana saranga na fahaizana io fa na ny faran‟izay mahantra, na ny manan-karembe na ny tsy mahay na ny manam-pahaizana be na ny manam-pahefana na ny vahoaka tsotra dia saika toy izany no hamaritan‟ny olona ny antsoina hoe sekta. Andeha ary ho jerentsika indray ny fijerin‟ny fiangonana ny antsoina hoe sekta. Ny fomba fijery ny fiangonana katolika aloha no hitondratsika azy.
Ho an’ny mpanoratra katolika
Ity ary ny famaritana omen’ny Katolika – (boky nosoratan‟i Père André Roger, Édition Jeune Chrétien navoakan‟ny edisiona Md Paoly mitondra ny lohateny hoe “INONA MOA NY SEKTA?” na “La tentation des sectes?”, (fa nadikan‟i Père RAMBOANASOLOMANANABonaventure tamin‟ny teny gasy). Izao no fomba hamaritan‟ity boky ity ny atao hoe sekta. Ny teny hoe sekta hoy izy dia avy tamin‟ny voambolana latina hoe secqui izany hoe manaraka no heviny na hoe” secar” na hoe manasaraka na hoe manapaka no heviny. Raha raisina amin‟ny voambolana latina ny teny hoe sekta, dia fitambarana teny roa: “secqui”, izay midika fa hoe “manaraka” manaraka zavatra iray na fampianarana iray na mpaminany iray. Na ihany koa hoe “secar” iazy midika hoe “manasaraka” na hoe “manapaka” na hoe “tafasaraka tamin-javatra iray na toerana misy azy”. Ka faritan‟ity boky ity fa “ny antsoina hoe sekta dia nisaraka tamin’ny fiangonana iray efa ela niorenana na tamin’ny sekta iray hafa, manaraka mpaninany iray sy ny hafatra entiny, sady mampianatra fomba fiainana iray manokana izay entin’ny mpaminany izay mitarika azy io”. Izay no famaritana ny sekta ato amin‟ity boky katolika ity. Raha fintinina izany dia izao: “ny sekta hoy izy dia fitambaran’ny teny latina roa : dia ny secqui (manaraka) sy ny secar (tafasaraka, manapaka tapaka ny fifandraisana) ka ny ankamaroan’ny sekta dia tafasaraka tamin’ny fiangonana ela niorenana ary manaraka mpaminany iray sy ny hafatra noentiny sady mampianatra fomba fiainana hafahafa”.
Ny dikan-teny latina
Raha izay no raisina, dia jereo ny fandehan‟ny tantara tamin‟ny taon-jato nisian‟i Jesosy Kristy. Raha raisina ilay hoe “secqui = manaraka”, “ny secar = tafasaraka” sy ny famaritana nomeny azy, raha tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy dia tsy nisy fiangonana kristiana fa ny fiangonana nisy dia ny fiangonana jodaisme. Ary i Jesosy Kristy dia tao amin‟ny fiangonana Jodaisme no nivavahany, satria tsy mbola nisy fiangonana kristiana tamin‟izany. I Jesosy Kristy ihany koa dia nolazain‟ny olona fa hoe “mpaminany” ary tena mpaminany tokoa izy. Ka raha jerena izany ilay famaritana nomen‟ny mpanoratra katolika teo izay, dia efa tsy afa-bela amin‟io i Jesosy Kristy, ka raha raisina ilay secar masaraka na tafasaraka na tapaka, dia jereo fa tafasaraka ny fifandraisan‟i Jesosy Kristy sy ny fiangonana Jodaisme. Ary dia nanenjika azy ny mpitondra fivavahana Jodaisme nanao hoe zava-doza no hataon‟ity lehilahy ity, ary fanahin‟ny demonia no hamoahan‟ity demony sy ny sisa,… Ka i Kristy amin‟ny maha mpaminany azy dia nanaraka azy ny olona, ary dia niafara tamin‟ny famonoana azy izany. Ary dia hatramin‟izao dia mbola misy ihany ny vahoaka manaraka an‟ity Jesosy Kristy ity dia ireo Kristiana. Ka raha izay no jerena raha araka ny famaritana hoe “ny antsoina hoe sekta dia nisaraka tamin’ny fiangonana iray efa ela niorenana na tamin’ny sekta iray hafa, manaraka mpaninany iray sy ny hafatra entiny, sady mampianantra fomba fiainana iray manokana izay hafahafa entin’ny mpaminany izay mitarika azy io” dia mazava ho azy izany, fa i Jesosy Kristy mihitsy no tratran‟izany zavatra izany, satria i Jesosy Kristy anie dia nitondra fampianarana hafahafa be mihitsy, ary dia betsaka ny fampianarana nentiny tamin‟izany. Ohatra iray akaiky indrindra dia filazany fa hoe: “izaho no mofon’aina ka izay mihinana ny nofoko sy misotro ny ràko no hanana ny fiainana mandrakizay”, dia atao ahoana no fomba hahatanterahan‟izany? tsy hafahafa tokoa ve izany?, ny rànao aza tsy ampy 5 litatra akory, ka ahoana no ahafahana misotro ny rànao? Tsy ampy ho sotroin‟olona 1000 akory izany! Tena mitondra fampianarana hafahafa mihitsy ity olona ity. “Izaho sy ny Ray dia iray ihany hoy izy, dia hoy ny olona fa manao anao ho iza moa ianao hoy ny rehetra? mbola tsy izy Abrahama dia efa Izy aho hoy i Jesosy Kristy ! Dia tsy hisy 50 taona akory ve ianao dia efa milaza fa hoe efa àry ianao tamin‟ny fotoanan‟ny Abrahama. Hoy koa Jesosy Kristy “ny maso solon’ny maso, ny nify solon’ny nify, fa izaho kosa milaza aminareo hoe omeo hanina ny fahavalonareo, aza manenjika izay manisy ratsy anareo”, dia fampianarana tena hafahafa tokoa izany satria olona efa manisy ratsy anao izany ve dia ho tsy valianao!! Izany ilay fampianarana hafahafa noentin‟ilay mpaminany. Ka raha tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy izany dia tsy afaka tamin‟io famaritana io mihitsy izany i Jesosy Kristy . Dia toy izany koa ny fiangonana katolika sy ny protestanta: hoy izy hoe ny ankamaroan‟ny sekta dia nisaraka tamin‟ny fiangonana ela niorenana na sekta iray hafa. Efa 1000 taona no niorenanan‟ny fiangonana katolika teo vao niorina indray ny fiangonana protestanta, dia ahoana indray ihany koa no ahafahan‟ity fiangonana protestanta ity tsy ho sekta indray eto. Dia nanaraka mpaminany sy mpampianatra azy, iza no mpampianatra tao? Tsy ry Luther ve no mpampianatra tao no nahatonga ny loterana niala tamin‟ny katolika! Ka efa 1000 taona niorenana ny katolika vao nivoaka ny protestanta dia tsy afaka amin‟izay ihany koa ny loterana. Na tamin‟ny sekta iray hafa, dia raisintsika ihany koa ny FJKM, sy ny Anglikana sy ny loterana, dia nisy fampianarana iray nivoaka indray koa tao, dia hitantsika hatrany ny fivoarana. Avy aiza no nivoahan‟ny Jesosy Mamonjy, ny Jesosy Fitiavana ny Jesosy Famonjena, ny Rhema, ny Arampilazan-Tsara, ny Jesosy Voavonjy. Ohatra izao ,ny apokalypsy dia avy aiza, avy tao amin‟ny fiangonana Adventiste izy no nipoitra. Ka sekta daholo izany ny fiangonana rehetra nisy raha araka ny famaritana nomen‟ilay mpanoratra katolika izay nandalina ny teny grika sy latina. Andeha indray ho jerentsika izay ambaran‟ny protestanta.
Ho an’ny protestanta –
Tsy dia mifanalavitra loatra amin‟izany ny azy. Misy boky iray hafa indray nakana ny famaritana izay hilazandry zareo azy. Izany dia mitondra ny lohateny hoe: “SOS sekta, VONJEO TSY HO LASAN’NY SEKTA NY OLONA”, ny mpanoratra azy dia i Pasitora RABEHATONINA James. Marina raha toa manoratra an‟io soratra io izy satria, ry zareo izany aloha dia efa mametraka ny tenany hoe tsy sekta. Ka asa na mba voadinik‟ity pasitora ity tsara ny zavatra voasoratra tao anatin‟io boky io, fa ho entitsika eto aloha izany fanehoan-kevitra nolazainy izany. Ao amin‟io boky io, ao amin‟ny paragraphe 1 pejy 7 dia misy soratra toy izao: “ny fomba hamantarana ny sekta” “Toko voalohany: inona moa ny sekta? ny teny hoe sekta dia anarana mahafaoka be, izay hifanondroan’ny mihevi-tena fa manana ny marina.Izany hoe izay mihevi-tena rehetra izany fa manana ny marina dia ambara fa sekta”.Izaho milaza amintsika fa hoe: hoy ny katolika very izay rehetra ivelan‟ny fiangonana fa tokana ihany ny Eglizy Katolika apostolika romana. Izany dia tena foto-kevitra iray lehibe voarakitra ao anatin‟ny katesizy mihitsy, ary misy fanontaniana apetrany ary ao manao hoe moa ve very izay rehetra tsy ao anatin‟ny fiangonana? Ny valiny omeny ao dia hoe: eny very izay rehetra tsy ao anatin‟ny fiangonana.Noho izany izay mihevi-tena fa marina hoy ny mpanoratra protestanta indray dia lazaina fa sekta, noho izany dia tsy afaka izany aloha hatreto ny fiangonana katolika fa sekta ihany koa izy raha izany. Ka raha ohatra ary ka marina ny fiangonana katolika romana moa ve ho nivoaka ho niala tao ny protestanta fa tsy nijanona tao? Fa matoa izany ny protestanta nivoaka avy tao dia mazava fa diso izany ny eglizy katolika fa ny protestanta no marina. Mazava hoa azy fa raha tsy diso ny fiangonana katolika dia tsy niala tao ry Luther, sy ny Calvin sy ny namany, fa nijanona tao izy, noho izany raha niala tao amin‟ny eglizy katolika ny mpanavao fivavahana dia midika hoe diso ny katolika fa ny azy no marina. Ary izay no mahatonga azy hilaza ato hoe vonjeo ny olona sao lasan‟ny sekta, satria aminy dia diso daholo ireo fiangonana sekta ireo, ka vonjeo ny olona sao lasa any amin‟ny fahadisoana any avokoa fa tokony ho tazomina ao anatin‟ny fahamarinana ao, ka dia mihevi-tena ho manana ny marina ihany izany ianao pasitera matoa mbola miezaka mitazona ny olona ijanona ao anatin‟ny everinao fa fiangonan‟ny fahamarinana. Ka dia afaka hilaza ve izany ianao pasitera hoe izahay tsy manana ny marina fa ny katolika ihany no manana ny marina fa niala tao fotsiny izahay! Tsy mino an‟izany aho, tsy marina izany, fa matoa isika tsy niverina tany amin‟ny katolika intsony dia mihevi-tena fa manana ny marina isika, fa raha tsy marina ny antsika dia inona no hataon‟ny protestanta eo fa tokony hiverina any amin‟ny katolika izy.
Ity ary ny famaritana omen’ny protestanta
Ilay boky mihitsy no hadika eto ara-bakiteny mba hahazoantsika azy. Pejy faha 8 ato amin‟ilay boky SOS SEKTA: “Ny teny tsirairay avy hoy izy dia misy loharano sy tantara nipoirany avokoa. Ny fototra hiavian’ilay teny tiana hohazavaina dia mivelatra kokoa hahazoana ny hevi-dalina raketina. Anisan’ny voambolana vahiny atao hoe SEKTA. Ny niandohany dia avy tamin’ny teny grika (izany hoe ity mpanoratra protestanta ity izany dia miditra lalin-dalina kokoa, satria raisiny avy any amin‟ny teny grika dia raisiny amin‟ny teny latina). Ka ity teny hoe “sekta” ity izany dia avy amin’ny teny grika no fiandohany, araka ny endriky ny teny no mampanan-karena ny dikany, ny fototeny dia ny hoe “hairetijo”, na “heretika” na “herezia”. Izay izany no nahatonga ny protestanta nolazaina fa hoe “heretika”, satria niendaka tao amin’ny katolika izy tamin’izany fotoana izany. Misy endrika telo ipotrany ao amin’ny testamenta vaovao:  Ny matoanteny hoy izy ny endrika voalohany ivoahany dia ilay hoe “haerestai” ny dikany dia ny hoe “mifidy”, “tia kokoa”, mifamatotra amin’ny zavatra iray (hebreo 11:25).  Ny faharoa dia izao anarana: “haerezis” izay midika hoe “antoko” na “andaniny” (asa 24:5).  Ny heviny fahatelo ny mpamari-toetra: “haeretikos”, ny dikan’izany dia hoe “ireo izay manao antokony” na “mitokana”, na “manao haerezia”, na “mpanohitra” izany.
Raha ny famaritana amin’ny teny latina indray dia izao
Ny sekta dia teny latina avy amin’ny fototeny hoe “sectus”, miteraka ny matoanteny hoe “secis” izay miray fototra amin’ny “sectes” sy “secar”. “Secar” dia midika hoe “manapaka”, manapaka ny iray ho roa na manapaka ny fitohizana ho samihafa. Ny hoe “secqui” dia hoe “manaraka”, tsy mahaleo tena fa manaraka ny hafa tsy mahajoro intsony tamin’izay efa nisy azy tany aloha, mora ozongozonina fa tsy mahajoro intsony. Dia toy ny olona mora ozongozonina izany, ohatra hoe: inona indray ny malaza dia hoe lasa nifindra protestanta indray hono fa tsy katolika intsony, avy eo lasa Temoin de Jehovah indray hono e! avy eo lasa tsy mihinana kisoa indray hono e! dia manara-drenirano fotsiny fa izy tsy miraharaha na inona na inona. Ny fahatelo dia ny hoe sekta: “antoko na fikambanan’olona manaraka fampianarana iray rehefa avy niendaka tamin’ny toerana nisy azy teo aloha, dia lasa antoko iray manaraka izay mpampianatra azy izay”. Raha izay no raisina dia mitovy tsara ny famaritana nomen‟ny mpanoratra katolika sy ny protestanta. Ka raha izay fotsiny no jerena dia hatramin‟izao aloha izany: i Jesosy Kristy dia niendaka tao amin‟ny fiangonana jodaisma, ary lasa nanorina fikambanana iray antsoina hoe kristiana, ary nanaraka mpampianatra iray dia i Jesosy Kristy , dia sekta izany aloha ny kristiana. Toy izany koa ny protestanta rehefa niendaka tao amin‟ny fiangonana katolika romana, dia nanaraka antokon‟olona iray hafa sy fampianarana hafa ka sekta ihany koa izany ny protestanta. Dia hatrany hatrany, sahala amin‟izany ihany koa izao ny apokalypsy, niala avy tao amin‟ny katolika, dia nakao amin‟ny protestanta ka lasa sekta tao, avy eo dia nivadika tao amin‟ny Jesosy Mamonjy dia lasa sekta tao ihany koa izany, avy eo dia nivadika adventista dia lasa sekta tao ihany koa izany, avy eo niendaka tao dia lasa apokalypsy dia lasa sekta tao ihany koa izany. Raha ny famaritana amin‟ny ankapobeny izany no niangana tamin‟ny teny grika sy teny latina ka tsy nisy afaka mihitsy izany izay efa niala tamin‟ny toerana nisy azy Isika kristiana rehetra, izay niainga tamin‟ny Jesosy Kristy, dia niala tao amin‟ny jodaisme ary efa tany izany no niainga io hoe sekta io hatramin‟izao fotoana iainantsika izao. Efa maro tokoa ny olona no efa naheno ity fampianarana ity, ary efa mihezaka ny manitsy ny filazana ny hoe sekta, satria raha ny famaritana nomena an‟ilay hoe sekta dia i Jesosy Kristy mihitsy no efa nahafeno izany fepetra izany, satria niendaka tamin‟ny fivavahan-drazana ka lasa hoe i Jesosy Kristy izany dia nitarika sekta na antoko, niendaka tamin‟ny fampianarana jodaisme, ary dia narahin‟ny olona rehefa avy nifidy mpianatra 12, ka namorona fampianarana vaovao. Ka noho izany ny kristiana izany dia antoko nanaraka ny fotom-pampianaran‟ny mpaminany iray izay atao hoe “Kristy” ka kristiana no hiantsoana izany fikambanana izany. fikambanan’olona manaraka fampianarana iray rehefa avy niendaka tamin’ny toerana nisy azy teo aloha, dia lasa antoko iray manaraka izay mpampianatra azy izay”. Raha izay no raisina dia mitovy tsara ny famaritana nomen‟ny mpanoratra katolika sy ny protestanta. Ka raha izay fotsiny no jerena dia hatramin‟izao aloha izany: i Jesosy Kristy dia niendaka tao amin‟ny fiangonana jodaisma, ary lasa nanorina fikambanana iray antsoina hoe kristiana, ary nanaraka mpampianatra iray dia i Jesosy Kristy , dia sekta izany aloha ny kristiana. Toy izany koa ny protestanta rehefa niendaka tao amin‟ny fiangonana katolika romana, dia nanaraka antokon‟olona iray hafa sy fampianarana hafa ka sekta ihany koa izany ny protestanta. Dia hatrany hatrany, sahala amin‟izany ihany koa izao ny apokalypsy, niala avy tao amin‟ny katolika, dia nakao amin‟ny protestanta ka lasa sekta tao, avy eo dia nivadika tao amin‟ny Jesosy Mamonjy dia lasa sekta tao ihany koa izany, avy eo dia nivadika adventista dia lasa sekta tao ihany koa izany, avy eo niendaka tao dia lasa apokalypsy dia lasa sekta tao ihany koa izany. Raha ny famaritana amin‟ny ankapobeny izany no niangana tamin‟ny teny grika sy teny latina ka tsy nisy afaka mihitsy izany izay efa niala tamin‟ny toerana nisy azy Isika kristiana rehetra, izay niainga tamin‟ny Jesosy Kristy, dia niala tao amin‟ny jodaisme ary efa tany izany no niainga io hoe sekta io hatramin‟izao fotoana iainantsika izao. Efa maro tokoa ny olona no efa naheno ity fampianarana ity, ary efa mihezaka ny manitsy ny filazana ny hoe sekta, satria raha ny famaritana nomena an‟ilay hoe sekta dia i Jesosy Kristy mihitsy no efa nahafeno izany fepetra izany, satria niendaka tamin‟ny fivavahan-drazana ka lasa hoe i Jesosy Kristy izany dia nitarika sekta na antoko, niendaka tamin‟ny fampianarana jodaisme, ary dia narahin‟ny olona rehefa avy nifidy mpianatra 12, ka namorona fampianarana vaovao. Ka noho izany ny kristiana izany dia antoko nanaraka ny fotom-pampianaran‟ny mpaminany iray izay atao hoe “Kristy” ka kristiana no hiantsoana izany fikambanana izany.
Tohizantsika ihany ny fanazavan‟i Pasitera RABEHATONINA James, ao anatin‟ilay boky mitondra ny lohanteny hoe “SOS SEKTA” ao amin‟ny pejy faha sivy ary dia akantsika lesona ihany, satria ny hevitra ara-panahy indray no amoahany azy ato. Hoy izy: – “Ny SEKTA araka ireo dikan-teny fototra nahazahoana azy ireo, dia izao no heviny: fihetsiketsehan’ny olona izay manaraka mpaminany iray sy ny fampianarany nefa dia mampifanaraka ny fombam-piainana hafahafa”. Marihina tsara fa ity mpanoratra ity, izay mpitondra fivavahana ao amin‟ny FJKM dia mihevitra fa tsy ao anatin‟ny sekta izy. Raha raisina indray izay famaritana napetrany izay, raha hiainga any amin‟ny tantaran‟ny fiangonana Jodaisme sy i Kristy isika dia inona no zava-nisy? i Jesosy Kristy dia efa hitantsika fa ambaran‟ny Soratra Masina fa mpaminany Izy. Nivoaka avy tao amin‟ny fiangonana Jodaisme i Jesosy Kristy dia nanao fihetsiketsehana, naminany ny amin‟ny zavatra maro i Jesosy Kristy toy ny fihaviany ny fahafatesany, ny faran‟izao tontolo izao, nilaza ny zavatra tsy nety nataon‟ireto mpitondra fivavahana ireto izy, nanao zavatra sy fomba fiainana hafahafa izy. Raha misy olona milaza fa hanaraka azy dia hoy izy hoe: ny amboahaolo mana-davaka hisitrihina, ny voromanidina manana ny akaniny fa ny Zanak‟olona tsy misy ny asian‟ny lohany, ka ianao ve hanaraka Ahy amin‟izany?; Izaho sy ny Ray dia iray ihany, Izaho no mofon‟aina, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny ràko no hanana ny fiainana mandrakizay. Mbola tsy izy i Abrahama dia efa izy Aho, izaho nivoaka avy tany amin‟ny Ray ary mbola hiverina any amin‟ny Ray. Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana , ka tsy misy mankany amin‟ny Ray hafa tsy amin‟ny alalako. Dia iza no olona anaiky an‟izany?, ka mba handramo anie hoe amin‟izao fotoana izao ianao dia miteny an‟izany, fa tsy ho lazain‟ny olona fa adala ianao!!. Fa izy Kristy mihitsy no miteny an‟izany. Amin‟ny olona izany dia fomba fampianarana hafahafa. Dia raha raisintsika indray ny katolika: efa niorina 1000 taona io fiangonana io vao tonga ny mpanavao fivavahana toa an-dry Luther, nisy ny fanitsiana ny fivavahana, dia nivoaka tao koa ry Luther izay mpaminany iray narahin‟ny olona maromaro, ary nisy fihetsiketsehana be tokoa tamin‟izany. Ka raha izany dia mbola tsy afaka tamin‟ilay sekta ihany koa izany ny fiangonana protestanta na dia fiangonana lehibe aza izy. Dia mbola tohizany ihany ny fanazavana teboka faharoa eo amin‟ilay fanazavana hita ao amin‟ilay boky “SOS SEKTA” ihany. Hoy izy : “fisarahana misy eo amin’ny fikambanana iray, na fiendahana tamin’izany fiakambanana izany ary dia manomboka manokan-tena tsy hifanerasera amin’ny fiangonana ara-tantara nisy teo aloha”. Raha ny hoe “Fisarahana misy eo amin‟ny fikambanana iray”, i Jesosy Kristy dia nisaraka tamin‟ny fiangonana Jodaisme dia lasa Kristianisme. I Luther nisaraka tamin‟ny fiangonana katolika, dia lasa fiangonana Loterana, i Calvin nisaraka tamin‟ny fiangonana katolika dia lasa fiangonana calviniste FJKM.
Ny apokalypsy niala tamin‟ny Adventiste dia lasa apokalypsy. Ny Jesosy Fitiavana, ny Jesosy Famonjena, ny Jesosy Mpamonjy dia nisaraka tamin‟ny Jesosy Mamonjy dia nitokana avy. Izany no antsoina hoe “sekta”, ary tena tsy misy afaka amin‟izany daholo izany ny rehetra. Ny teboka fahatelo, hilazany azy ihany koa: “antokom-pivavahana izay te hiseho ho mpamaky sy mpandinika ny baiboly, sady manaraka mpaminany iray na mpitarika iray, izay mihevi-tena ho any afaka mamoaka ny hevitry ny teny noho ny fanahy masina, azy samirery hono”. Izay no teboka fahatelo. Raha izay indray no jerena, dia ny katolika ihany no tsy sekta raha izany, satria raha vao nivoaka avy tao amin‟ny katolika ry Luther sy ny namany, dia niseho ho mpandinika ny baiboly mihitsy izy ireo.RyCalvin sy ny namany no nanangana ny fikambanana mpampiely baiboly ka nanatonta ny baiboly ho amin‟ny fiteny maro samihafa.
Ary tonga nandinika ny baiboly daholo indray ny olona. Ka ny hoe manaraka mpaminany iray dia tsy iza fa ny mpitarika azy, ny loterana izao dia nanaraka an‟dr‟i Luther, ny Calviniste izao dia nanaraka an-dr‟i Calvin, ny katolika izao manaraka ny Pape, tamin‟ny andron‟i Paoly dia nanaraka an‟i Paoly ny mpianatra, tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy dia nanaraka an‟i Jesosy ny mpianatra 12 lahy. Ka izany zavatra hitantsika rehetra izany, dia tsy mivaona amin‟ny fiangonana rehetra mihitsy. Fa ny fahitako azy dia izao: ity mpanoratra ity miheritreritra fa hoe hasiana mafy amin‟ity ny fiangonana ivelan‟ny efatra tonta, fa ireo no tena sekta mamoafady, fa ilay zavatra resahiny ato dia toa miampanga tena ihany ny zavatra voalazany eto fa tsy afaka tamin‟izany mihitsy izy. Ny fanamarihana farany, dia hoy izy ato hoe: “Raha fintinina izany ny antsoina hoe sekta, dia izao hoe: fikambanan’ireo niova fo ka manohitra ny fiangonana ara-tantara, ary mamorona antoko vaovao, izay mikendry ny hanangona izao tontolo izao ho amin’ny fotom-pinoana tokana, tsy tongatonga ho azy anefa izany fa misy antony lehibe.”
Raha fintinina izany ny antsoina hoe sekta dia izao hoe fikambanan’ireo niova fo: dia lasa mampieritreritra izany, satria izay tsy sekta ve izany dia tsy mba niova fo? Am- pitahao tsara izany famaritana izany teo amin‟ny fiangonana jodaisme, sy Kristy, satria ny kristiana izany dia fikambanan‟ireo mpino niova fo, ka nanangana antoko iray. Kristy izany dia sekta niendaka tamin‟ny fiangonana jodaisme, ary nanohitra ny fiangonana ara-tantara. Izany no nahatonga an‟i Jesosy Kristy nanohitra ny fampianaran‟ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna; izany no nampahatonga an‟i Jesosy Kristy nanohitra an‟ireo “ lozanareo ry Fariseo sy mpanora-dalana fa ianareo tsy miditra ny te hiditra sakananareo; lozanareo ry Fariseo sy mpanora-dalana fa ianareo no fasana milalotra fotsy fotsiny madio ivelany fa ny ao anatiny dia feno robaka sy maimbo sy loto; lozanareo ry Fariseo sy mpanora-dalana fa sakananareo ny fanjakan’ny lanitra, ianareo tsy miditra ny hafa te hiditra sakananareo, lozanareo ry Fariseo sy mpanora-dalana, fa haridrinareo ny fahalalana, ianareo tsy mandray ny fahalalana ny soratra masina, izay te handray sakananareo, hoe aza mihaino an‟io, fa ianareo ve adala, mpaminany sandoka io mpamitaka io. Tena tsy nifandray tamin‟ny fiangonana ara-tantara izy, ary dia nanangana antoko vaovao, ary nikendry ny hitondra ny fampianarana ho amin‟izao tontolo izao. Lasa i Kristy dia nametraka an‟izay hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maha iray antsika. Izay no nataon‟i Jesosy Kristy rehefa nivavaka tamin‟ny Ray izy: Jaona 17:21« mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. » Ka raha raisina izany ny hoe famaritana ny antsoina hoe sekta, mazava be mihitsy ny baiboly, fa raha vao fiangonana Kristiana no misy anao izany, dia mpanaradia an‟i Kristy, dia efa sekta jodaisme ianao izany, satria nivoaka avy tao ianao.
Ny hamintinana azy dia izao:
Asan’ny Apostoly 24:1 – 5 «1 [Ny nitsarana an’i Paoly teo anatrehan’i Feliksa, sy ny nifatorany roa taona tao Kaisaria] Ary rehefa afaka hadimiana dia nidina Ananiasy mpisoronabe mbamin’ny loholona sasany sy Tertylo, mpandaha-teny anankiray, izay nanambara tamin’ny mpanapaka ny niampangany an’i Paoly. 2 Ary rehefa nantsoina izy, dia niampanga azy Tertylo ka nanao hoe: 3 Hianao no ahazoanay fiadanana lehibe, ary ny fitondranao efa nampandry tsara ity firenena ity; koa raisinay amin’ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny izany, ry Feliksa tsara indrindra ô. 4 Fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, trarantitra ianao, henoy kely amin’ny faharetana izahay. 5 Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny Jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan’ilay antoko atao hoe Nazarena. » amin‟ny dikan-teny frantsay dia mazava be mihitsy ny hilazany azy hoe Actes des Apôtres 24:5 « car nous avons trouvé que cet homme est une peste, et qu’il excite des séditions parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée, et qu’il est un meneur de la secte des Nazaréens ; » Eto izany dia tonga ny mpitondra fiavavahana nandeha tany amin‟ny governora, lasa niampanga an‟i Paoly tao amin‟ity governora ity ireto mpitondra fivavahana Jiosy ireto, dia ry Ananiasy mpisorona be ary ny loholona sasany sy mpisolo vava iray ilay Tertylo, dia niampanga an‟i Paoly izy ka ahoana no niampangany azy : « Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny Jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan’ilay antoko atao hoe Nazarena. » fa amin‟ny teny frantsay dia izao no hilazany azy : Actes des Apôtres 24:5 « car nous avons trouvé que cet homme est une peste, et qu’il excite des séditions parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée, et qu’il est un meneur de la secte des Nazaréens ; » Nampitoviany tamin‟ny areti-mandoza” Pesita” mihitsy i Paoly eto. Ahoana izany hoe “pesita” izany: raha mitranga izany aretina pesita izany dia ny fanjakana iray manontolo mihitsy no mihetsika mandray an-tanana ny ady mba tsy hiparitahan‟izany aretina izany eny amin‟ny fiaraha-monina. Ka i Paoly izany dia noampangaina hoe sekta Nazarena ka izany sekta izany dia tena zava-doza teo amin‟ny fiangonan-drazana ny fampianarana izay nentin‟i Jesosy Kristy tao amin‟ny fiangonana, fa toy ny aretina pesita izay mifindra tokoa ka mitondra fahapotehan‟ny fiangonana Jiosy, fa lasa mivadika ho kristiana daholo, ka dia lasa miampanga an‟i Paoly tany amin‟ny governora hoe: “hitanay fa io lehilahy io dia tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny Jiosy rehetra eny tontolo eny”, ka izay moa no nandikantsika gasy azy fa tsy nataontsika hoe: “io lehilahy io dia toy ny areti-mamindra” pesita”. Dia voalaza fa nampikomy ny vahoaka rehetra izy, ary izy no mpitarika ilay sekta Nazarena.
Ahoana moa izany hoe Nazarena izany?
Matio 2:23 « Ary nony tonga tany izy, dia nonina tao amin’ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: Hatao hoe Nazarena Izy. » ka eto dia i Paoly no lazaina fa lehiben‟ny sekta Nazarena. Ka zava-doza teo amin‟ny fiangonana Jiosy izany ry Paoly sy i Jesosy Kristy satria nahasahy milaza ny marina. Ka ho an‟ny fiangonana tsy mahasahy milaza ny marina izany, dia tena zava-doza ho azy ny fisian‟ny fiangonana mahasahy milaza ny marina. Fa tsy maintsy hiarihary eo daholo ny fitaka nentiny namitaka ireo mpino tao aminy ireo.
– Ho an‟ireo olona izay mihevi-tena fa hoe tsy sekta ny fiangonana misy azy (ireo ao anatin‟ny fiangonana 4 tonta FFKM), dia izao indray no hamaritany ny filazana ny hoe sekta: Ato amin‟ilay boky hoe “SOS SEKTA” ihany, fa any amin‟ny pejy faha fito dia milaza zavatra toy izao: “efa fantatry ny baiboly hoy izy ny fisan’ny olona mitondra fampianarana hafahafa ka mahatonga fahavoazana ho an’ny fiangonana” raha io teny io no fakafakaintsika kely hoe: Tahatahaka ny ahoana moa izao izany fampianarana hafahafa mitondra fahavoazana ho an‟ny fiangonana izany? Dia mba hananantsika fomba fijery mivelatra hatrany, dia tsy izao taon-jato iainantsika izao no ho jerentsika, fa ilay tany aloha atrany: itodiantsika ny lasa, ho banjinintsika ny ankehitriny, ary ho jerentsika ny ho avy. Ka ity boky izay nosoratan‟ny Pasitora FJKM ity, dia napetrany tsara fa misy tokoa io fampianarana mitondra fahavoazana ho an‟ny fiangonana io. Dia manome toko sy andininy moa izy anaporofoiny izany: Asan’ny Apostoly 24:5 « Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny Jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan’ilay antoko atao hoe Nazarena. » Asan’ny Apostoly 24:14 « Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny fampianarana*[*Gr. lalàna] izay ataony hoe fitokoana no anompoako an’Andriamanitry ny razako, sady inoako izay rehetra voasoratra eo amin’ny lalàna sy ny mpaminany, » Amin‟ity mpanoratra ity dia tena nitondra fahavoazana ho an‟ny fiangoanana jodaisme mihitsy ilay fampianaran‟i Paoly. Izany hoe ireto mpitondra fivavahana ireto izany, dia milaza fa ny fampianaran‟i Paoly dia mitondra fikorontanana na fitokonana eny tontolo eny, kanefa dia ambaran‟i Paoly tsara, fa io fampianarana izay lazaina fa fitokoana, na antoko izay hitokoana io no anompoako an’Andriamanitry ny razako, sady inoako izay rehetra voasoratra eo amin’ny lalàna sy ny mpaminany Asan’ny Apostoly 24:15 « ary manantena amin’Andriamanitra aho, izay antenain’izy ireo koa, fa hisy fitsanganan’ny marina sy ny meloka. » Izay no fiarovantena ho an‟ny Paoly. Ka hoe mitondra fahavoazana ho an‟ny fiangonana ny sekta hoy izy fa mitondra fampianarana hafahafa. Ka raha raisina tokoa ny fiangonana jodaisme dia izao: tena nitondra fahavoazana teo amin‟ny fiangonana jodaisme mihitsy ny sekta Nazarena, dia i Paoly no lehibeny.
Inona ny fahavoazana nisy tamin‟izany?
 Nanomboka nahiratra ny mason‟ny olona,
 nanombokaniteny fiainana ny vahoaka?
 nanomboka nahafantatra ny maha mpamonjy an‟i Jesosy Kristy ny vahoaka fa hay ny nahafatesany sy ny nilevenany, sy ny nitsanganany dia ny ho famonjena ny olombelona , ka dia ho vavolombelon‟izany famonjena izany no nitorian-dr‟i Paoly ny filazantsara, ka ny fitorian‟dry Paoly ny fitsanganan‟i Jesosy Kristy tamin‟ny maty izany, no nampivarahontsana ny mpitondra fivavahana tao amin‟ny fiangonan-drazana, ka nampidirana am-ponja an‟i Paoly sy ny apostoly hafa, ary dia norarana mafy mihitsy izy ireo tsy hitory izany hoe Jesosy Kristy maty izany. Asan’ny Apostoly 5:17 – 18 «17 [Ny namatorana ny Apostoly rehetra, sy ny nitondrana azy teo anatrehan’ny Synedriona] Ary nitsangana ny mpisoronabe mbamin’ny namany rehetra (izay antokon’ny Sadoseo), fa feno fialonana izy, 18 dia nisambotra ny Apostoly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. » Niroborobo be ny asa fitoriana nataon‟ireto apostoly ireto, dia feno fialonana ireto mpitondra fivavahana tao amin‟ny fiangonan-drazana ireto, ka dia nampiditra azy ireto tany am-ponja. Ary satria niaraka mihitsy ireo mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana tamin‟izany fotoana izany, dia ilay fahefam-panjakana mihitsy no nentin‟ny mpitondra fivavahana hanagadrana izay mianan-kendry manohitra azy ireo, ka mitondra fotom-pivavahana hafa. Be dia be tokoa amin‟izao fotoana izao no zavatra tsikaritra, satria maro ireo mpitondra fivavahana izay feno fialonana mahita ny firoboroboan‟ny fiangonana sasany ary dia mitady izay hanapotehana azy. Ka ireny no ilay toetsain‟ny Sadoseo sy ny Fariseo sy ny toe-tsain‟ireo mpisorom-be tamin‟izany dia ilay manenjika sy miampanga ireo fiangonan‟Andriamanitra izay mandroso ny asany, ka tsy misy na inona na inona azony atao rehefa mandroso tsara ny fiangonan‟Andriamanitra fa dia ny manompanompa sy miampanga izay fiangonan‟Andriamanitra mandroso ny asany. Ataony tsy mitsahatra mihitsy izany fanenjehana rehetra izany mba hanetsehana sy handrangitana ny fanjakana hisambotra sy hampiditra amponja azy ireo dia hogadraina avy eo, ary dia ny anjely no namoaka azy tao, avy eo dia lasa mitory eny an-kalamanjana indray. Dia ny mahagaga kely dia ity hoe:olona avy nogadraina sy nilefa izany ve dia tsy tokony hiafina fa toa vao mainka lasa mitory eny an-dalambe indray? Fa ry zareo rehefa avy nampidirina tao amponja Tsiafahy ohatra dia lasa indray izy mitory eny Analakely eny amin‟ny “esplanade”. Dia ahoana hoy ny olona, ireo olona nogadraina tany Tsiafahy ireny anie ilay nandositra tafavoaka tao dia hitanay mitory ery Analakely ery. Dia nosamborina indray, ka inona no zavatra nitranga rehefa nosamborina indray izy ireo? Hoy ireo mpanora-dalana sy mpitondra fiangonana izay nisambotra sy niampanga azy ireo: Asan’ny Apostoly 5:28 – 33«28 ka nanao hoe: Efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin’izany anarana izany; kanjo, indro, efa nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo hankinina aminay ny ran’izany Lehilahy izany. 29 Fa Petera sy ny Apostoly namaly ka nanao hoe: Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona. 30 Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an’i Jesosy, Izay novonoin’ny tananareo nahantonareo teo amin’ny hazo. 31 Izy nasandratry ny tanana ankavanan’Andriamanitra*[* Na: nasandratra ho eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra] ho Tompo sy Mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an’ny Isiraely. 32 Ary izahay dia vavolombelon’izany zavatra izany, ary ny Fanahy Masina koa, Izay efa nomen’Andriamanitra ny manaiky Azy. 33 Ary raha nandre izany izy, dia lotika ny fony, ka nihendry hamono azy izy. »Lotika ny fon‟ireto mpitondra fivavahana ireto fa voapotsipotsitra teo daholo ny marina rehetra, fa iny Jesosy iny Izay novonoin’ny tananareo, nahantonareo teo amin’ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan’Andriamanitra ho Tompo sy Mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an’ny Isiraely.
Ary izahay dia vavolombelon’izany zavatra izany, ianareo mihatsaravelatsihy fotsiny hoe mpitondra fivavahana, nefa mpitondra fivavahana mamono olona ianareo, fa i Kristy no novonoinareo! Dia izany kosa mba tsy rariny kosa izany hoy ireto hoy ireto mpitondra fivavahana ireto fa sangy mihoatra ny loha izany, dia tena lotika ny fony, ary dia niara-nisaina izy ireo nanao hoe andeha ho vonoina ireto hoy izy ireo fa raha tsy izany dia ho asa izay hahazo antsika eto. Dia toy izany hatrany no ataon‟ireo mpitondra fivavahana rehetra izay tsy mahomby ny asany, fa ny famonoana no tena kasainy atao hatrany.
Ka ity famonoana ity anie tsy voatery hoe famonoana ara-nofo na ara-bakiteny, fa ireny fiampangana lainga, fanaratsiana, fampielezana vaovao tsy marina hafafifafy eran‟ny haino aman-jery rehetra ireny na radio na fahitalavitra dia famonoan‟olona daholo ireny satria nahoana? Feno fialonana ilay mpitondra fivavahana fa tsy mahazo olona ny asany, ary raha mahazo aza izy dia mitsipitsipika kely, tsy betsaka, fa mihidy amin‟ny toerana iray fotsiny, ary rehefa feno fialonana izy dia tonga miampaga io. Dia milaza izy ireto fa tena zava-doza ity sekta nazarena ity, fa tena sahy milaza ny marina tokoa ireto mpianatry Kristy ireto, hatrany amin‟i Apostoly Paoly ary tena sahy milaza ny marina mihitsy, ary nikendry ny hamono azy avokoa ireto olona ireto. Eny fa hatramin‟ny andron‟i Jesosy Kristy dia efa nisy izany:
Jaona 11:47 – 53 «47 Ary ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo nanangona ny Synedriona ka nanao hoe: Ahoana no hataontsika? fa iny Lehilahy iny dia manao famantarana maro. 48 Raha avelantsika hanao toy izany ihany Izy, dia hino Azy avokoa ny olona rehetra; ary ho avy ny Romana ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. 49 Ary ny anankiray taminy, dia Kaiafa, mpisoronabe tamin’izany taona izany, nanao taminy hoe: Hianareo tsy mahalala na inona na inona, 50 na misaina akory fa tsara ho anareo, raha ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. 51 Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisoronabe tamin’izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena; 52 ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak’Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. 53 Koa hatramin’izany andro izany dia nihendry hahafaty Azy ireo. »
Jereo tsara izany fa nataon‟ireo daholo izay mety ho endriky ny fanaratsiana rehetra, hoe mpaminany sandoka io, demoniaka io, mpamitaka io, belzeboba no amoahan‟io devoly, ianareo koa ve mba voafitaka no manaraka an‟io e! Jerena anefa ny olona fa nino an‟ity Jesosy Kristy ity, ka nanaraka ny fampianarana rehetra, dia hoy izy ireo hoe raha avelantsika hanao toy izany ihany Izy, dia hino Azy avokoa ny olona rehetra;
Raha hiverenantsika ilay teo aloha dia hoe: efa noraranay ianareo tsy ampianatra izany anarana izany, kanefa dia mbola aparitakareo eran‟i Madagasikara ity fampianarana apokalypsy ity, fenoinareo ny fampianaranareo i Jerosalema renivohitra. Dia tsy zakan‟ny olona ny zavatra marina. Ka zava-doza ho an‟ny fiangonana ara-tantara izany ny fisian‟ny fiangonana sekta sahy milaza ny tena marina amin‟ny Soratra Masina. Izay izany ny lafiny anankiray, zava-doza izay raha tany amin‟ny fiangonana Jodaisma. Fa raha hitarina ilay tantara dia zava-doza ho an‟ny fiangonana katolika ihany koa ny fisian-dry Luther sy ry Calvin ka sahy nilaza ny marina tamin‟ny fanavaozana ara-pivavahana, ka nanjary lasa nampiparitaka sy nahavaky, ary nampizarazara ny fiangonana katolika, ka lasa nisy ny katolika orthodoxes, nisy lasa loterana nisy ny anglikana nivoaka avy tany amin‟ny loterana; fa taloha dia tsy nisy hafa tsy katolika irery no teo.
Fa ahoana ary no nahitan-dr‟i Luther sy i Calvin olona hanaraka azy? Dia mazava fa mpivavaka tao amin‟ny katolika ihany ireo voasarika hifindra ho loterana sy anglikana sy orthodoxe ireo. Ary dia zava-doza ho an‟ny katolika izany ny famotsipotserana nataon-dry zareo mpanavao fivavahana ireto, izay namotsipotsitra ny hoe: tsy izy ny afo fandiovana e!, tsy izy ny fiankohofana amin‟i masina Maria io na ny mariologie io e!, tsy izy ny mikofesy e! tsy izy ny sary vongana na ny statue io e!, tsy izy ny resaka inquisition sy ny namany io e!, tsy izy ny indulgence, na ilay vidim-pahotana (izany hoe raha manota izany dia mandoa vola dia afaka ny fahotana). Ka tena zava doza ho an‟ny katolika tokoa izany famotsipotserana rehetra izany, satria nitondra fisarahana izany zavatra izany. Dia hatrany hatrany ny fandehan‟ny tantara. Fa ny faharoa ihany koa, dia tena zava-doza ho an‟ny fiangonana ihany koa ny fanodikodinana ny zavatra marina ho tsy marina intsony. Tena zava-doza ho an‟ny fiangonana izany, ohatra ny hoe: filazan‟ny fiangonana sekta sasany izay milaza fa efa foana sy tsy misy intsony izany didin‟Andriamanitra izany, fa dia afaka mangalatra, afaka mandainga, afaka manompo sampy izany ny olona. Dia lazaina izany fa hoe: andevo izay tsy mangalatra sy voafehin‟ny didy sy ny lalàna, satria mitandrina ny didy folo, na hoe andevo izay tsy mijangajanga satria mitandrina ny didy folo, ka zava-doza eo amin‟ny fiangonana izany, raha ny marina indray no lasa tsy marina.
Fa zava-doza ho an‟ny fiangonana ihany koa ny sekta izay mitarika ny olona hiala amin‟i Jesosy Kristy marina ka mandeha ho any amin‟ny Jesosy Kristy sandoka ihany koa. Mitondra zava-doza ihany koa izany ho an‟ny fiangonana, ary izay no ilana fitandremana ny amin‟ireny fampianarana mandeha rehetra ireny, fa mila mianatra tsara ianao mba tsy ho voarebirebin‟ireo fampianarana haparitaky satana mba handrebirebena ny zanak‟Andriamanitra. Angamba ataoko fa hoe ampy izay fanazavana ny famaritana ny hatao hoe sekta izay. Fa raha fintinina izany ny atao hoe sekta ity dia ity Asan’ny apostoly 24:5« Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny Jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan’ilay antoko atao hoe Nazarena. » dia io no mahafehy tsara ny famaritana ny atao hoe sekta. Ka eto dia tsy tokony ho menatra ianao raha misy milaza fa hoe sekta, satria i Paoly no lazaina eto fa lehiben‟ny sekta Nazareana, ary i Jesosy Kristy Ilay tompon‟ny fanambarana ato amin‟ny bokin‟ny Apokalypsy no lehiben‟izany sekta izany. Noho izany: tsy gaga izany isika raha kilasian‟ny olona hoe sekta eny amin‟ny gazety eny, ka ambarany hoe “sekta apokalypsy,” satria amin‟ilay mpanao gazety dia tena te hanondro-maso, te hanosom-potaka mihitsy izy milaza an‟izany hoe sekta ireto. Te hilaza izy hoe tena zava-doza izany sekta izany, ary te hilaza izy fa tena zavatra tsy misy dikany mihitsy izany hoe sekta izany, kanefa isika dia tena tsy menatra mihitsy raha misy milaza fa hoe “sekta apokalypsy” isika, satria ny Apokalypsy dia midika fa hoe fanambaran‟i Jesosy Kristy, ary izy Nazarena, ka ny fanambaran‟ilay sekta Nazarena no entitsika, ka inona no maha-menatra antsika amin‟izany?. Fa ireo mpiteny an‟izany no diso hevitra raha milaza an‟izany fa tsy fantany akory ny zavatra lazainy. Fa tokony ho reharehantsika ny lazaina hoe sekta, ary dia sekta milaza ny marina, ary raha tsy ny Fanahy Masina no mitari-dalana anao dia ho tsy ahita an‟izany mihitsy ianao.
Ny tantaran‟ny fiangonana Filadelfia izany dia miresaka ny fiangonana Sekta, ka raha tena tsorina izany ny hoe “Iza ireo fiangonana sekta ireo?” Dia tsy iza fa ireo fiangonana izay manao batisan‟olon-dehibe, satria isan‟ny fototra anankiray izany tena nampivoaka ity fiangonana vaovao ity dia ny fotom-pampianarana momba ity batisa ity. Satria nanomboka teo dia nivoaka ny fampianarana momba ny batisan‟olon-dehibe. Ampianaro aloha ny firenena rehetra, izay ianareo vao manao batisa azy amin‟ny anaran‟ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Mibebaha ianareo ka aoka hatao batisa amin‟ny anaran‟i Jesosy Kristy mba hahazoanareo famelan-keloka; izay mino sy hatao batisa no hovonjena, ary dia i Jesosy Kristy mihitsy moa no nanao modely nanantona an‟i Jaona mba hatao batisa, tsy zaza fa olon-dehibe. Ka izay fotom-pampianarana izay indray izany no nivoaka. Dia nanahirana ny fiangonana protestanta izay efa niorina ela tamin‟izany io resaka batisa io, satria ny batisan-jaza izay niainan‟ny fiangonana katolika ihany no nataony, fa rehefa nisokatra moa ny baiboly, (io ilay hoe misy varavarana mivoha eo anoloanao ka tsy hisy maharindrina intsony), ka efa namaky ny baiboly ny olona, dia nivoaka izay foto-pampianarana izay. Ary dia taty aorian‟izay ihany koa aza dia nivoaka ihany koa ny foto-pampianarana iray izay milaza fa hoe: tokony hiverina hanaja ny sabata indray ny olona, fa ny sabata dia an‟Andriamanitra fa ny alahady kosa dia an‟ny katolika.
Ireo rehetra ireo no fampianarana be dia be nivoaka nahitana ireto fiangonana sekta izay efa noresahintsika tany aloha ireto, ka nisy maromaro ihany izy ireo toy ny: Adventiste (1844), ny Vavolombelon‟i Jehovah, ny Pentekotiste,ny Baha‟i, ny Apostolika, ny Rose Croix, ny Mormons, ny Scientiste, ny Moons, dia tonga taty aoriana teto Madagasikara, dia nisy ny Ara-pilazantsara, ny Rhema, ny Fiainana ao amin‟i Kristy, misy ny Guerie de Christ, misy ny Assemblé de Dieu, misy ny Jesosy Famonjena,ny Jesosy Fahamarinantsika, ny Jesosy Vatolampy, ny Jesosy Mamonjy, Jesosy Mpamonjy sns, ary izy io dia vokatr‟ilay hoe varavarana mivoha no nipoiran‟ireny rehetra ireny taty aoriana dia nisy ihany koa ny Apokalypsy.
Publié dans FIZARANA VOALOHANY : NY TANTARAN’NY FIANGONANA FITO
FIANGONANA FAHADIMY: SARDISY
FIANGONANA FAHAFITO: LAODIKIA